मन्त्रिमण्डल हेरफेरः विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र जनार्दन शर्मा मन्त्री बन्दै, कसलाई कुन मन्त्रालय ? - मन्त्रिमण्डल हेरफेरः विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र जनार्दन शर्मा मन्त्री बन्दै, कसलाई कुन मन्त्रालय ? -
मन्त्रिमण्डल हेरफेरः विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र जनार्दन शर्मा मन्त्री बन्दै, कसलाई कुन मन्त्रालय ?
उज्यालो प्रतिनिधि २० आश्विन २०७७, मंगलवार फोटो समाचार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने भएका छन् । आज (मंगलबार) मध्यान्ह बस्न लागेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा तत्काल ३ जना मन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको उच्च स्रोतले उज्यालो नेटवर्कलाई जानकारी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार पूर्वएमालेका तर्फबाट नेकपा महासचिव समेत रहेका विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्नेगरि तयारी अघि बढेको छ । उनको साथै, पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका सुरेन्द्र पाण्डेको पनि नाम मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेको छ । स्रोतका अनुसार सम्भवतः अर्थमन्त्रीमा पौडेललाई नियक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
पछिल्लो केहीदिनदेखि प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी भालुवाङ राख्ने भएपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्नेगरि प्रधानमन्त्री ओलीले पौडेललाई मन्त्री बनाउने तयारी थालेका हुन् । बुटवल स्थायी राजधानी हुन माग गर्दै व्यापक विरोध भएसँगै ओली निकटका दुई नेताहरुलाई साम्य पार्नका लागि ओलीले पौडेललाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन लागेको बुझिएको छ ।
स्थायी राजधानी भालुवाङ राख्ने पक्षमा प्रधानमन्त्रीकै विश्वास पात्रमध्येका अर्का नेता तथा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल देखिएपछि ओलीले पौडेललाई अर्थको जिम्मेवारी दिएर विवाद मत्थर पार्नतिर लागेको धेरैको बुझाई छ ।
त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रीमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा जनार्दन शर्मालाई ल्याउनेगरि तयारी अघि बढेको स्रोतको दाबी छ । तर, जनार्दन भने संचार मन्त्रालयमा जान अनिच्छुक रहेका छन् ।
उता, पूर्वमाओवादी कोटाबाट नै पम्फा भुसाल, प्रभु साह लगायतको नाम मन्त्री बन्ने चर्चामा छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली किस्तामा मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने तयारी गर्दै आजको मन्त्रीपरिषदबाट ३ जनालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पक्षमा रहेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।